Nagu saabsan - Jinan Power Rubber Roller Qalabka Co., Ltd.
Jiilkeenna cusub ee qalabka duubista caaggu wuxuu siiyaa barxad wanaagsan wax soo saarka caqliga badan. Xiriirka ka dhexeeya maareeyayaasha wax soo saarka iyo hawlwadeenada goobta, wadaaga xogta, duubista iyo kormeerka waxaa lagu gaari karaa iyada oo loo marayo qalabka hawlgalka, iyadoo la abuurayo xaalado wanaagsan oo lagu xakameynayo wax soo saarka kala duwan.
Shirkaddayadu waxay siineysaa soosaarayaal caag ah oo leh qalab aad u sax ah, waara oo wax soo saar leh. Alaabtayada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin: Mashiinka Rullaluisteeda Shaashadda, Mashiinka Mashiinka Mashiinka / Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka daboolaya, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah, Qalabka Cabbiraadda Xirfadlaha, Iwm.
Sanadkii 2000, badeecadeenu waxay soo martay kormeerka Xarunta Shahaadada Tayada ee CCIB iyadoo la raacayo heerarka ISO 9001. Adoo adeegsanaya qalabkayaga, waxaad kordhin doontaa waxtarka farsamaynta, waxaadna sare u qaadi doontaa tayada wax soo saarka. Sidoo kale waxay keeni kartaa faa'iido dhaqaale oo badan.